XOG:- Shirka madasha wadatashiga qaran oo la isku raacay in gobolka Banaadir xubno laga siiyo Aqalka Sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shirka madasha wadatashiga qaran oo la isku raacay in gobolka Banaadir xubno laga siiyo Aqalka Sare
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ay isku af-garteen in gobolka Banaadir xubno laga siiyo Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Warar lagu kalasoonaan karo ayaa sidoo kale sheegaya in ilaa 15 xubnood loo qoondeeyay gobolka Banaadir, balse weli la isku fahmi la’yahay qaabkii xubnahaasi loo qeybsan lahaa.
Madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaba arrinta ah in xubnaha cusub ee lagu kordhinaayo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay ku yimaadaan magaca gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho, laakiin waxaa arrintaasi kasoo horjeeda madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo ku doodaya in gobolka Banaadir aanu ahayn maamul goboleed.
Dhinaca kale, madaxweyne C/weli Gaas ayaa soo jeediyay arrinta ah in 15-ka xubnood loo qeybsado qaab beeleed Soomaali oo xubno ka helaan maadama caasimadda Muqdisho ay tahay meel Soomaali u dhaxeeyso, waxaana arritaan ay keentay in arrinkaasi la isku mari waayo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay inuu arrintaan dhex-galo, si labada dhinac tanaasul looga helo, loogana gudbo caqabadahaan hor-taagan shirka madasha wadatashiga qaranka oo maalintiisii afaraad galay.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, waxaana weli socda shirar xasaasi ah oo ay kala yeelanaan madaxda isku haysa qeybsiga xubnahaasi ee baarlamaanka cusub Soomaaliya looga qoondeeyay gobolka Banaadir.